Japanese Fashion Magazine “Seventeen”
ဂျပန်မှ အမျိုးသမီး ဖက်ရှင် မဂ္ဂဇင်း "Seveteen" JCHမှာ ရောက်ပါပြီ။ ဂျပန်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေကြားမှာ ခေတ်စားနေသော ဒီနှစ်နွေရာသီ ဖက်ရှင်တွေနှင့် ခေတ်ပေါ် မိတ်ကပ်ပြင်ဆင် ခြယ်သပုံတွေကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဆက်ဆက် လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 日本より女性ファッション誌「セブンティーン」最新号がJCHに届きました。日本のティーンの間で流行っている今年の夏のファッションやメイクのトレンドが紹介されていますよ。是非読みに来てね。
Japanese Games Event - Kirigami
ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၏ Japanese Games Eventတွင် ဂျပန်ရိုးရာကစားနည်းတွေထဲကမှ "Kirigami" ကစားနည်းကို အဓိကထားပြီး မနက် ၉နာရီခွဲမှ ညနေ ၅နာရီခွဲအထိ မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ အခြေခံမရှိသူများကိုလည်း JCHမှာ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လာရောက်က စား ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Paper Craft Club will be opened in July 2018 at JCH
ဇူလိုင်လကစတင်ပြီး Japan Culture House မှာ လစဉ် ပထမမြောက်အပတ်၏ နေ့လည်ပိုင်းအချိန်တွင် Paper Craft Club ကို စတင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားပါမည်။ မွေးနေ့ကဒ် ၊ လက်ဆောင်ဗူး အစရှိသည့် လစဉ် မတူညီသော ပစ္စည်းများကို ပြုလုပ်သွားပါမည်။
Tanaba Festival,ayearly rendezvous, is held in Japan on July 7.
Tanabata, or the star festival, is observed on July 7. As the date approaches, long, narrow strips of colorful paper known as tanzaku, vibrant ornaments, and other decorations are hung from bamboo branches, enlivening the decor of homes as well as brightening shopping arcades, train stations, and other public spaces. Before they are hung, tanzaku are inscribed withawish, such asachild’s dream of becomingafamous soccer player oraparent’s hope for career success. Tanaba Festival,ayearly rendezvous, is held in Japan on July 7.
AFS Project students are studying Hiragana while playing Karuta game
AFS Project students are studying Hiragana while playing Karuta game.
The June issue of magazine with colourful pictures: Animedia
ဇွန်လထုတ်၏ "Animedia"မှာ Detective Conan: Zero Executor နှင့်Shinkansen ပုံစံ စက်ရုပ် Shinkalion Anime ဇာတ်လမ်း နှစ်ခုတို့ရဲ့ အထူး မျက်နှာဖုံးကာဗာ ဖြစ်ပါတယ်။
A book on biography of those who endeavored to struggle for life and peace
"အသက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သူများ၏ အတ္ထုပ္ပတိ"အကြောင်း မိတ်ဆက်ထားတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ အသက်တွေကို ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းကြသူများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။
Introducing New Magazines
အသစ်ရောက်ရှိထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဂျပန် အသက်၃၀အရွယ် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ထောက်ခံပေးထားတဲ့ လူကြိုက်များသော လူနေမှုပုံစံ ဖက်ရှုင် မဂ္ဂဇင်း Veryရဲ့ မတ်လထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လထုတ်စာအုပ်မှာတော့ "သပ်သပ်ရပ်ရပ် အဝတ်အစား" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဆက်လာရောက်လေ့လာပေးပါ။
Hina Festival (Jap Doll Festival)
မတ်လ ၃ရက်နေ့က ဂျပန်မှာ ဘာနေ့လဲဆိုတာ သိပါသလား။ မိန်းကလေးများပွဲတော် "ဟိန အရုပ်ပွဲတော်"ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ JCHမှာ ဟိန အရုပ်ပွဲတော်အတွက် လူအရုပ်၊ ဟိနအရုပ်ကို အလှဆင်ထားပါတယ်။ ဟိန အရုပ်ပွဲတော် ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုဖြစ်လာရလဲ၊ ဟိန အရုပ်ပွဲတော်မှာ စားတဲ့ အထူးဟင်းလျာတွေကို အကြောင်းပြောပါမယ်။ ပြီးတော့ အတူတူ ဟိန အရုပ်လေးတွေ ခေါက်ပြီး ဟိနပွဲတော်ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Let’s sing Japanese songs
visitors : 52,491